အခြေခံပညာ ကျောင်းများပြန် ဖွင့်ဖို့ ရက် အနည်းငယ် နောက်ကျမည် . . . – Let Pan Daily
အခြေခံပညာ ကျောင်းများပြန် ဖွင့်ဖို့ ရက် အနည်းငယ် နောက်ကျမည် . . .
Let Pan | May 12, 2020 | Local News | No Comments
အခြေခံပညာကျောင်း များ ဖွင့်လှစ်ချိန် အနည်းငယ်နောက်ကျနိုင်
နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထား သည့်သတ်မှတ်ချက်များ ကိုမေလ ၁၅ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် ဖြေလျှော့ပေးမည်ဆိုပါက အခြေခံပညာကျောင်းများကို မူလကျောင်းဖွင့်ချိန် ဇွန်လ ၁ရက်နေ့ထက် ရက်အနည်းငယ်နောက်ကျပြီးမှ ဖွင့်လှစ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းက မေ ၁၀ရက်တွင် မြန်မာတိုင်းမ်ကို ပြောသည်။
၎င်းက “ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေက စလုပ်ခွင့်ရပြီ ဆိုရင်တောင်မှ နှစ်ပတ် နဲ့ပြီးဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ မူလအတိုင်းဖွင့်ချင်လည်း ဖွင့်နိုင်မယ်မူလထက်နောက်ကျပြီးမှလည်းဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ နှစ်ပတ်နောက်ကျမယ် တစ်ပတ်နောက်ကျမယ် တို့ သုံးပတ်နောက်ကျမယ် တို့ ဒါတွေကတော့လုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ဗဟိုကော်မတီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆောင်ရွက်သွားဖို့လုပ်နေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည် ဆိုပါကလည်း ယခင်း အတိုင်းဖွင့်လှစ်၍ မရဘဲ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန က သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည့် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ခြင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသည့် အကွာအဝေးအတိုင်းနေထိုင်စေခြင်း စသည့်အချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးကိုလေးဝင်းက “ ဖွင့်ရင်တောင်မှ ဒီအတိုင်းကြီးပဲ အရင်တုန်း ကလည်း ပုံမှန်အတိုင်းကြီးဖွင့်လို့မရပါဘူး။ကော်မတီရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေလိုက်နာရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်း နှာခေါင်းစည်းတပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်မယ်။
နောက်တစ်ခု Social Distancing ပေါ့။ အနည်းဆုံး ၆ ပေကွာ သို့မဟုတ် ၃ပေကွာဆိုတဲ့ အချက်တွေ လုပ်ဖို့လိုပါမယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းအတွက်လည်းကြိုတင်လုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ် သည့်အနေဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို နှာခေါင်းစည်းများနှင့် Face Shield များပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်းနှင့် ကျောင်းချိန်များကိုလည်း ယခင်တစ်ချိန် ကျောင်းများ နှစ်ချိန်ခွဲတက် နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
၎င်းက“ကျောင်းသားနည်းတဲ့ကျောင်းလေးတွေရှိမယ်။ အဲဒီလိုကျောင်းလေးတွေ ကတော့ တစ်ချိန်ကျောင်းအနေနဲ့ ပဲသွားမယ်။ ကျောင်းသားများရင်တော့ Social Distancing အတွက် နှစ်သုတ် တက်နဲ့ သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်။
နောက် ကလေးတွေ အတွက် ကတော့ နှာခေါင်းစည်းတွေပေါ့။ တစ်ခါသုံးတွေတော့ မပေးနိုင်ဘူး။ တစ်ခါသုံးပြီးနေ့တိုင်း နေ့ တိုင်းပေးနေဖို့အတွက်က တော့ကျွန်တော်တို့မှာ ပိုက်ဆံမရှိပါဘူး။
အဲဒီတော့ပြန်လျော်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့ အဝတ် Mask လေးတွေကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ အဲဒီ ဒီဇိုင်းကိုလုပ်ငန်းရှင်ကိုအပ်ပြီးတော့ ကျောင်းဖွင့်ချိန်အမီဝေနိုင်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်။ နောက်တစ်ခုက Face Shield ပေါ့။
အထူးသဖြင့်တော့ကလေးတွေ အကုန်လုံးကို ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်။ဆရာ ဆရာမတွေအတွက်ကလည်း လိုအပ်ရင်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ မေလ ၁၅ရက်နေ့ မတိုင်မီထွက်ရှိလာမည့်ကော်မတီ ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်မူတည်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အခြေခံကျောင်းများကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရမည်ဆိုပါက ချက်ချင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း မျိုးဆောင်ရွက်၍မရပဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေနှင့် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက် နေကြောင်း ဦးကိုလေးဝင်းက ပြောသည်။
၎င်းက “ ကျောင်းဖွင့်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ရမှာတွေက ၄တန်း ၈တန်း အောင်စာရင်းမထုတ်ရသေးဘူး။ ကျောင်းတွင်း စစ်တွေတောင်တချို့ အောင်စာရင်းမထုတ်ရသေးဘူး။ မပြီးသေးဘဲနဲ့ ကျန်နေတဲ့ကျောင်းတွင်းစစ်တွေကို ထပ်ပြီးတော့မှ အဖြေလွှာစစ်ဖို့ ကျန်နေတဲ့ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနည်းငယ်ကျန်နေသေးတယ်။အကုန်လုံးတော့ တော်တော်များများပြီးနေပြီ။
၄တန်း ၈တန်းက တချို့ ပြည်နယ်တိုင်းက ပြီးပြီ တချို့ ပြည်နယ်တိုင်းတွေက တစ်ဝက်လောက် ပဲကျန် တယ်။ ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကလည်း အဖြေလွှာစစ်ဖို့လုပ်နေရင်း တန်းလန်းပဲ ရပ်လိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါကလည်းပြန်ပြီးတော့ ကုတ်လုပ်တာတို့ အဖြေလွှာစစ်ဆေးတာတို့ အောင်စာရင်းအတွက်ပြင်ဆင်ရဦးမယ်။ အဲဒါတွေပြီးမှ ကျောင်းကဖွင့်နိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအဖြေလွှာစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို ပုံမှန်အားဖြင့်ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ စတင်စစ် ဆေးချိန် မှ အောင်စာရင်းထွက်ချိန်အထိ တစ်လခွဲလောက်အချိန်ယူဆောင်ရွက်လေ့ရှိသော်လည်း ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ပိုမိုမြန်ဆန်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးကိုလေးဝင်းက ဆိုသည်။
၎င်းက ”အခုအခြေအနေအရဆိုရင် ခါတိုင်းပုံမှန် ၁၀တန်းအောင်စာရင်းကို ထုတ်နိုင်ဖို့လုပ်တာထက်ပိုပြီးတော့ မြန်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့။ အရင်တုန်းကတော့အေးဆေးလုပ်လို့ရတယ်။အခုတော့မရဘူး။
နောက်တစ်ခုက ကိုဗစ်-၁၉ရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက် သွားဖို့လိုသလို မူလနှုန်းထက်တော့မြန်အောင်လည်း လုပ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျောင်းဖွင့်ရက်အများကြီးနောက်ကျသွားမှာလည်းစိုးတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယင်းအပြင် ဗဟိုကော်မတီက လက်ရှိထုတ်ပြန်ထားသည့် ကြေညာချက် လမ်းညွှန်ချက်များကိုသက်တမ်းတိုး လိုက်မည်ဆိုပါက အခြေခံပညာကျောင်းများကို ဇွန်လ အတွင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် အခက်အခဲရှိနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ဦးကိုလေးဝင်းက ဆိုသည်။
ယခုအခါ ကျောင်းဖွင့်ချိန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးမျိုးပြောဆိုဝေဖန်မှုများ ရှိနေသော်လည်း အခြေခံပညာဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အခြေအနေအပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီး ကလေးများ၏ သင်ကြားသင်ယူမှုကာလများကို ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
The Myanmar Times မှ အများအတွက် ကူးယူဖော်ပြ အပ်ပါသည်။ ဆရာဇော်လင်းဦး
အခွခေံပညာကြောငျး မြား ဖှငျ့လှဈခြိနျ အနညျးငယျနောကျကနြိုငျ
နိုငျငံတျောကခမြှတျထား သညျ့သတျမှတျခကျြမြား ကိုမလေ ၁၅ရကျနေ့ နောကျပိုငျးတှငျ ဖွလြှေော့ပေးမညျဆိုပါက အခွခေံပညာကြောငျးမြားကို မူလကြောငျးဖှငျ့ခြိနျ ဇှနျလ ၁ရကျနထေ့ကျ ရကျအနညျးငယျနောကျကပြွီးမှ ဖှငျ့လှဈနိုငျမညျ ဖွဈကွောငျး ပညာရေးဝနျကွီးဌာန အခွခေံပညာဦးစီးဌာနမှ ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးကိုလေးဝငျးက မေ ၁၀ရကျတှငျ မွနျမာတိုငျးမျကို ပွောသညျ။
၎င်းငျးက “ကြှနျတျောတို့လုပျတဲ့လုပျငနျးတှကေ စလုပျခှငျ့ရပွီ ဆိုရငျတောငျမှ နှဈပတျ နဲ့ပွီးဖို့ဆိုတာနညျးနညျးခကျနိုငျတယျ၊ ဒါကွောငျ့မို့ မူလအတိုငျးဖှငျ့ခငျြလညျး ဖှငျ့နိုငျမယျမူလထကျနောကျကပြွီးမှလညျးဖှငျ့နိုငျပါတယျ။
ဥပမာ နှဈပတျနောကျကမြယျ တဈပတျနောကျကမြယျ တို့ သုံးပတျနောကျကမြယျ တို့ ဒါတှကေတော့လုပျငနျးပျေါမှာမူတညျပွီးတော့ ဗဟိုကျောမတီရဲ့လမျးညှနျခကျြပျေါမှာမူတညျပွီးဆောငျရှကျသှားဖို့လုပျနပေါတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ကြောငျးမြား ပွနျလညျဖှငျ့လှဈမညျ ဆိုပါကလညျး ယခငျး အတိုငျးဖှငျ့လှဈ၍ မရဘဲ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာန က သတျမှတျခကျြမြားဖွဈသညျ့ နှာခေါငျးစညျးတပျဆငျခွငျး တဈဦးနှငျ့တဈဦးသတျမှတျထားသညျ့ အကှာအဝေးအတိုငျးနထေိုငျစခွေငျး စသညျ့အခကျြမြားနှငျ့ ကိုကျညီအောငျဆောငျရှကျရနျ လိုအပျကွောငျး သိရသညျ။
ဦးကိုလေးဝငျးက “ ဖှငျ့ရငျတောငျမှ ဒီအတိုငျးကွီးပဲ အရငျတုနျး ကလညျး ပုံမှနျအတိုငျးကွီးဖှငျ့လို့မရပါဘူး။ကျောမတီရဲ့ ညှနျကွားခကျြတှလေိုကျနာရဦးမှာဖွဈပါတယျ။ ကြောငျးသားကြောငျးသူတိုငျး နှာခေါငျးစညျးတပျရမယျဆိုတာမြိုးဖွဈမယျ။
နောကျတဈခု Social Distancing ပေါ့။ အနညျးဆုံး ၆ ပကှော သို့မဟုတျ ၃ပကှောဆိုတဲ့ အခကျြတှေ လုပျဖို့လိုပါမယျ”ဟု ပွောသညျ။
ယငျးအတှကျလညျးကွိုတငျလုပျဆောငျမှုမြားပွုလုပျ သညျ့အနဖွေငျ့ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြားကို နှာခေါငျးစညျးမြားနှငျ့ Face Shield မြားပေးနိုငျရေး ဆောငျရှကျနကွေောငျးနှငျ့ ကြောငျးခြိနျမြားကိုလညျး ယခငျတဈခြိနျ ကြောငျးမြား နှဈခြိနျခှဲတကျ နိုငျဖို့ဆောငျရှကျနကွေောငျး ၎င်းငျးက ပွောသညျ။
၎င်းငျးက“ကြောငျးသားနညျးတဲ့ကြောငျးလေးတှရှေိမယျ။ အဲဒီလိုကြောငျးလေးတှေ ကတော့ တဈခြိနျကြောငျးအနနေဲ့ ပဲသှားမယျ။ ကြောငျးသားမြားရငျတော့ Social Distancing အတှကျ နှဈသုတျ တကျနဲ့ သှားဖို့စီစဉျနတေယျ။
နောကျ ကလေးတှေ အတှကျ ကတော့ နှာခေါငျးစညျးတှပေေါ့။ တဈခါသုံးတှတေော့ မပေးနိုငျဘူး။ တဈခါသုံးပွီးနတေို့ငျး နေ့ တိုငျးပေးနဖေို့အတှကျက တော့ကြှနျတျောတို့မှာ ပိုကျဆံမရှိပါဘူး။
အဲဒီတော့ပွနျလြျောပွီးသုံးလို့ရတဲ့ အဝတျ Mask လေးတှကေို ဒီဇိုငျးဆှဲပွီးတော့ အဲဒီ ဒီဇိုငျးကိုလုပျငနျးရှငျကိုအပျပွီးတော့ ကြောငျးဖှငျ့ခြိနျအမီဝနေိုငျဖို့အတှကျလုပျနတေယျ။ နောကျတဈခုက Face Shield ပေါ့။
အထူးသဖွငျ့တော့ကလေးတှေ အကုနျလုံးကို ဝနေိုငျဖို့အတှကျလုပျနတေယျ။ဆရာ ဆရာမတှအေတှကျကလညျး လိုအပျရငျလုပျပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကာကှယျ ထိနျးခြုပျကုသရေး ဗဟိုကျောမတီ၏ မလေ ၁၅ရကျနေ့ မတိုငျမီထှကျရှိလာမညျ့ကျောမတီ ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြပျေါမူတညျဆောငျရှကျရမညျဖွဈပွီး အခွခေံကြောငျးမြားကို ပွနျလညျဖှငျ့လှဈခှငျ့ရမညျဆိုပါက ခကျြခငျြးပွနျလညျဖှငျ့လှဈခွငျး မြိုးဆောငျရှကျ၍မရပဲ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုမြားဆောငျရှကျရမညျဖွဈပွီး ယငျးအတှကျ ပညာရေးဝနျကွီးဌာန အနနှေငျ့ အဆငျသငျ့ဖွဈအောငျဆောငျရှကျ နကွေောငျး ဦးကိုလေးဝငျးက ပွောသညျ။
၎င်းငျးက “ ကြောငျးဖှငျ့ဖို့အတှကျ ပွငျဆငျရမှာတှကေ ၄တနျး ၈တနျး အောငျစာရငျးမထုတျရသေးဘူး။ ကြောငျးတှငျး စဈတှတေောငျတခြို့ အောငျစာရငျးမထုတျရသေးဘူး။ မပွီးသေးဘဲနဲ့ ကနျြနတေဲ့ကြောငျးတှငျးစဈတှကေို ထပျပွီးတော့မှ အဖွလှောစဈဖို့ ကနျြနတေဲ့ ပွညျနယျနဲ့တိုငျးအနညျးငယျကနျြနသေေးတယျ။အကုနျလုံးတော့ တျောတျောမြားမြားပွီးနပွေီ။
၄တနျး ၈တနျးက တခြို့ ပွညျနယျတိုငျးက ပွီးပွီ တခြို့ ပွညျနယျတိုငျးတှကေ တဈဝကျလောကျ ပဲကနျြ တယျ။ ပွီးတော့ တက်ကသိုလျဝငျတနျး စာမေးပှဲကလညျး အဖွလှောစဈဖို့လုပျနရေငျး တနျးလနျးပဲ ရပျလိုကျတာ ဖွဈတဲ့အတှကျအဲဒါကလညျးပွနျပွီးတော့ ကုတျလုပျတာတို့ အဖွလှောစဈဆေးတာတို့ အောငျစာရငျးအတှကျပွငျဆငျရဦးမယျ။ အဲဒါတှပွေီးမှ ကြောငျးကဖှငျ့နိုငျ မှာဖွဈပါတယျ” ဟု ပွောသညျ။
တက်ကသိုလျဝငျတနျး စာမေးပှဲအဖွလှောစဈဆေးခွငျး လုပျငနျးမြားကို ပုံမှနျအားဖွငျ့ဧပွီလ ၁ ရကျနေ့ စတငျစဈ ဆေးခြိနျ မှ အောငျစာရငျးထှကျခြိနျအထိ တဈလခှဲလောကျအခြိနျယူဆောငျရှကျလရှေိ့သျောလညျး ယခုတဈကွိမျတှငျ ပိုမိုမွနျဆနျအောငျဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး ဦးကိုလေးဝငျးက ဆိုသညျ။
၎င်းငျးက ”အခုအခွအေနအေရဆိုရငျ ခါတိုငျးပုံမှနျ ၁၀တနျးအောငျစာရငျးကို ထုတျနိုငျဖို့လုပျတာထကျပိုပွီးတော့ မွနျအောငျလုပျရမှာပေါ့။ အရငျတုနျးကတော့အေးဆေးလုပျလို့ရတယျ။အခုတော့မရဘူး။
နောကျတဈခုက ကိုဗဈ-၁၉ရဲ့ ကနျ့သတျခကျြတှအေတိုငျးလိုကျနာဆောငျရှကျ သှားဖို့လိုသလို မူလနှုနျးထကျတော့မွနျအောငျလညျး လုပျရမယျ။ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျကြောငျးဖှငျ့ရကျအမြားကွီးနောကျကသြှားမှာလညျးစိုးတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ယငျးအပွငျ ဗဟိုကျောမတီက လကျရှိထုတျပွနျထားသညျ့ ကွညောခကျြ လမျးညှနျခကျြမြားကိုသကျတမျးတိုး လိုကျမညျဆိုပါက အခွခေံပညာကြောငျးမြားကို ဇှနျလ အတှငျးဖှငျ့လှဈနိုငျရနျ အခကျအခဲရှိနိုငျကွောငျးကိုလညျး ဦးကိုလေးဝငျးက ဆိုသညျ။
ယခုအခါ ကြောငျးဖှငျ့ခြိနျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ အမြိုးမြိုးပွောဆိုဝဖေနျမှုမြား ရှိနသေျောလညျး အခွခေံပညာဦးစီးဌာနအနဖွေငျ့ ဖွဈနိုငျခွရှေိသညျ့အခွအေနအေပျေါမှာ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျဆောငျရှကျပေးနပွေီး ကလေးမြား၏ သငျကွားသငျယူမှုကာလမြားကို ပုံမှနျအတိုငျးဖွဈအောငျ ပညာရေးဝနျကွီးဌာန၏လမျးညှနျခကျြနှငျ့အညီဆောငျရှကျနကွေောငျး သိရသညျ။
The Myanmar Times မှ အမြားအတှကျ ကူးယူဖျောပွ အပျပါသညျ။ ဆရာဇျောလငျးဦး
ကင်ဆာ ကို စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှု နဲ့ အောင်နိုင် ခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်
ကဲ .. လာပါပြီ (၁၀)တန်း တစ်နှစ်ထဲ စာလုပ်ရုံ နဲ့ မရ တော့တဲ့ ပညာ ရေး…
အခြေခံ ပညာကျောင်းတွေ တစ်နှစ်နားမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းမှာ သတင်းအမှားသာဖြစ်
ဘာတွေဖြစ်လာ မှာလဲ သေသေချချာ မသိသေးတဲ့ ကိုဗစ် နဲ့ သတိထား ရမယ့် မြန်မာပြည်